ग्रहचक्रमा मंगलको उथलपुथल, यी ४ राशिलाई लाभै-लाभ ! – List Khabar
Home / धर्म सस्किर्ती / ग्रहचक्रमा मंगलको उथलपुथल, यी ४ राशिलाई लाभै-लाभ !
admin2weeks ago धर्म सस्किर्ती Leaveacomment 91 Views
एजेन्सी – मंगल ग्रहले बुधबार बिहान राशि परिवर्तन गरेको छ। बुधबार बिहान ७ बजेर ४ मिनेटमा मंगल ग्रहले राशि परिवर्तन गरेको हो। त्यस समयपश्चात मंगल ग्रह मिथुन राशिबाट कर्कट राशिमा प्रवेश गरेको छ। मंगलको राशि परिवर्तनले सम्पूर्ण राशिमा प्रभाव पार्नेछ। मंगलका कारण अब निम्न केहि राशिहरुलाई लाभै-लाभ हुनेछ।
मंगल कर्कट राशिमा प्रवेश गर्दा मेष राशि हुनेहरुलाई आर्थिक रुपमा लाभ मिल्नेछ। चौथो स्थानको मंगलले मेष राशि हुनेहरुको आम्दानी बढाउने मात्र नभई नयाँ बाटोहरु पनि खोल्नेछ। नयाँ कार्य थालनीका लागि परिवार मात्र नभई आफन्तजनबाट पनि पूर्ण सहयोग मिल्नेछ। स्वास्थ्यमा पनि सुधार आउनेछ। प्रेम जीवनमा पनि मंगलको शुभ प्रभाव रहनेछ।
मंगलको राशि परिवर्तन कन्या राशि हुनेहरुलाई धेरै नै लाभप्रद सावित हुने देखिन्छ। मंगलका कारण पराक्रम बढ्न सक्ला। कार्यक्षेत्रमा प्रभाव जन्माउन सक्दा महत्वपूर्ण कार्यहरु समयमै सम्पन्न हुनेछन्। यधपी महत्वपूर्ण निर्णय लिनु अगाडी भने परिवारमा छलफल गर्नु होला। विद्यार्थी, खेलाडी तथा कलाकारहरुलाई पनि मंगलको राशि परिवर्तनले लाभ दिलाउनेछ।
पाँचौं स्थानमा हुने मंगल मीन राशि हुनेहरुका लागि धेरै नै लाभदायक सावित हुनेछ। व्यापार-व्यवसायमा नसोचेको लाभ मिल्नेछ। आर्थिक रुपमा रहेका समस्या देखि छुटकारा मिल्दा थप बाटाहरु खुल्नेछन्। रोजगारीको क्षेत्रमा पनि आशा अगरियेजस्तै लाभ मिल्नेछन्। प्रियजनबाट उपहार मिल्ने पनि देखिन्छ। प्रतिष्पर्धाहरुमा सहजै सफलता मिल्न सक्ला।
Previous स’ङ्क्रमित बिरामीसँगै रात बि’ताउदै आएकी एक शा’हसिक नर्स भन्छिन्,”मृ’त्युसँग डर छैन”(भिडियो सहित हे’र्नुहोस्)
Next आज पनि संक्रमित हुने भन्दा निको हुने बढी